प्रवासी – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on युएईका राजकुमार मोहम्मदले दिए दुबईको जेलमा रहेका नेपाली पत्रकार पाण्डेलाई माफी, छिट्टै रिहाइ हुने
पत्रकार पाण्डेलाई जेल सजाय सुनाइएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो । त्यसपछि युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले युएईमा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उनको सजाय माफीका लागि गत बुधबार भेटी अनुरोध गरेका थिए ।
ती प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले युएईका राजकुमार समक्ष कुरा पुर्याएका थिए । त्यसपछि राजकुमारले सजाय माफी गरेको दूतावास स्रोतले न्युज कारखानालाई बताएको छ । नेपाल डिपोर्ट नहुने गरी पत्रकार पाण्डेको सजाय माफी गरिएको दूतावास स्रोतले बताएको छ ।
No Comments on अष्ट्रेलियावासी नेपाली भन्छन्- ‘लिभिङ-टुगेदर’ गज्जब (भिडियोसहित)
‘लि-भिङ-टु-गेदर’को संस्कार सुरू गरेको अष्ट्रेलियामा अहिले नेपालीहरू पनि सहजताका लागि सँगै बस्छन् । यो संस्कार सहज र खर्च कम गर्नका लागि विद्यार्थीहरूले अपनाएको बाटो थियो ।
‘लि-भिङ-टुगे-दर’सँगै स-म्बन्ध विस्तारको क्रम पनि बढ्दा यसका सकारात्मक फाइदा निक्कै थिए । तर, यसलाई एकथरीले विभिन्न ठाउँमा ‘वि-कृति’का रूपमा विकास गरेका छन् ।
यो क्रम विश्वका धेरै देशमा बढिसकेको छ । तर, सहजताभन्दा शा-रि/-रीक स-/म्बन्ध, भावनात्मक धो-का र अ-प/राधलाई पनि ‘लि-भिङ-टुगे-दर’सँगै बढेपछि मिश्रित धारणा राखेको छ । अष्ट्रेलियामा बसेका कतिपय नेपाली ’लि-भिङ-टुगे-दर’लाई समझादरी र सकारात्मक बाटोबाट प्रयोग गरे राम्रो हुने भन्छन् ।
राम्रोसँगै वि-कृति पनि बढेका कारण कतिपयले यसलाई नकारात्मक दृष्टिमा पनि राखेका छन् । राम्रोका लागि भए गज्जब र नराम्रोका लागि चाहिँ प्रश्रय गर्न नहुने धारणा धेरैको छ ।
नेपालको माटो ढोगेर म’र्न चाहन्छन् फिजीका नेपाली
No Comments on नेपालको माटो ढोगेर म’र्न चाहन्छन् फिजीका नेपाली
मैले यो अनुसन्धानमूलक लेख डिल्लीराम अम्माईंको डायरीबाट उद्धृत गरेको छु । सबैथोक भएर पनि पहिचान नभएको अनुहार लिएर परिचयविहीन मान्छेको रुपमा रहनुपर्दा सचेत प्राणी मान्छेलाई कति पी’डा पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा खोजीको यो लेखले प्रस्ट बोलेको छ ।
फिजीमा बस्ने नेपाली र त्यहाँको थप रहनसहन थाहा पाउन ‘फिजीमा नेपाली’ भनी युट्युब सर्च गर्न सकिन्छ । यसले अवश्य पनि तपाईंभित्र रहेको कौतुहलतालाई केही हदसम्म मेटाउन सक्ला भन्ने मेरो अनुमान छ ।फिजी दक्षिण प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापुहरुको समूह हो । फिजी न्युजिल्यान्डको उत्तर र अस्ट्रेलियाको पूर्वमा छ ।
फिजी भन्ने देश कसरी बन्यो र बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि शासकहरुले फिजीको मौलिक पहिचानको विरूद्ध कसरी धावा बोले ? ४० प्रतिशत भारतीयले फिजीका आदिवासीहरुको मूल थलो कसरी कब्जा गरे ? त्योबारे यहाँ बहस गर्न खोजिएको होइन ।
यहाँ भारतीय ब्रिटिस कम्पनीले सन् १८७९ को मे महिनामा झुक्याएर उखुखेतीमा काम गर्नका लागि फिजी पु¥याइएका नेपाली (३६० जना पुरूष र २५० महिला)हरुको अवस्था, उनीहरुको चासो र जानकारीमा आएका तथ्यहरुबारे बहस गर्न खोजिएको हो ।दक्षिण प्रशान्त महासागरको बीचमा रहेको ३३३ टापुहरुको देश फिजीमा नेपाली मूलका मानिसहरु पनि बसोवास गरेको कुरा हालै प्रकाशमा आएको छ ।
९ लाख १९ हजार १९ जनसंख्यामध्ये करिब १२ हजारको संख्यामा नेपालीहरु ४ पुस्तादेखि फिजीमा बसोवास गरिरहेको तथ्यलाई बाहिर ल्याउने अस्ट्रेलियन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक तथा वल्र्ड पिस काउन्सिलका दूत राजन शर्माप्रति जति आभार व्यक्त गरे पनि थोरै हुन्छ ।
उनले फिजीमा बसोवास गर्ने नेपालीको भोगाइबारे धेरै तथ्यहरु बाहिर ल्याइदिएका छन् ।त्यहाँ बसोवास गर्ने नेपालीले अहिलेसम्म आफ्नो पहिचान पाएका छैनन् । इतिहासको त्यो औपनिवेशिक कालखण्डमा घोलिएको विषले उनीहरुको भाषा र वेशभूषा मात्र खाएन नेपाली पहिचान नै खान पुग्यो ।
फिजी पु¥याइएको नेपालीको पहिलो पुस्ताले आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झेर बेलायती कारिन्दाको रुपमा काम गर्नुबाहेक नेपाल जीवनकालमा कहिल्यै फर्कन पाएनन् ।त्यो पुस्ताले नेपाली कामदारबारे तात्कालिक नेपाल सरकारसँग कुनै सम्झौता नभएकोले बलजफ्त भिराइदिएको भारतीय मूलको परिचय बोकेर फिजीमा आफ्नो इहलीला समाप्त गरे ।
अर्को पुस्ताले पनि नेपालसँग जोडिने विश्वासिलो आधार पाएन । आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झना र पी’डाका आँसु समर्पित गर्दै सेरोगेट आमाको काखमा उनीहरुले जीवन समर्पण गरे ।त्यसपछिको पुस्ताले आफ्नो बुबाले भनेका नेपालका कथाहरु सुने, तर राज्यबाट अ’पहेलित हुने भयले नेपाली भाषा र भूषालाई कायम राख्न सकेनन् ।
पुरानो पुस्ताको नेपालसँगको आत्मिक श्रद्धा पनि समयक्रममा कमजोर हुँदै गयो । नेपाल, आमा, बुबा, दिदीबहिनी, भात, टोपी, हिमाल, पशुपति, बुद्धजस्ता केही शब्दमा मात्रै उनीहरुको नेपाली भाषिक ज्ञान खु’म्चिइसकेको देखिन्छ । त्यो उनीहरुले चाहेर भएको होइन ।
नेपालीको परिचय लुकाएर बेलायतीहरुले फिजी पु¥याएका थिए । उनीहरुलाई कलकत्ता बन्दरगाहबाट भूदास ग्रिबिटियाको रुपमा झु’क्याएर त्यहाँ लगिएको थियो ।जानकारीमा आएअनुसार उनीहरुले अझै पनि त्यहाँ नेपाली चाडपर्व, सामाजिक संस्कार र परम्परालाई नेपाली शैलीमा धानेका छन् ।
अघिल्लो पुस्ताको नेपालसँग जोडिने चाहना अझै पनि तीव्र छ । यदि उनीहरुले नेपालमा सम्पत्तिको अधिकारलाई कानुनी आधार दिने हो भने नेपालमा आफ्नो घर बनाएर आफ्नै वंशको रगत दिने आमाको काखमा मर्न चाहन्छन् । फिजीको राजधानी ‘शुभ’देखि १७० किलोमिटर पूर्व रहेको सिगाकोटा र काभानान्गासाउमा आफ्नै आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएका छन् ।
त्यहाँका नेपाली महेशदत्त शर्मा, सुधीर शर्मा, प्रवीणदेव घर्ती, विक्रम सिंह (१०० वर्ष), मान सिंह (८९ वर्ष) हरुको अझै पनि नेपाली बनेर मर्ने धोको छ । त्यहाँ राई, लिम्बू, शेर्पा, सापकोटालगायत थर भएका नेपाली पनि रहेको प्राध्यापक राजन शर्माले बताएका छन् ।
नेपालीको घना बस्ती भएको सिगाटोका र हेलम्बूबाहेक केही नेपाली बस्तीहरु भिटी लेभु, भानुआ लेभु, लाबासालगायतका स्थानमा समेत रहेको राजन शर्माको खोजले देखाउँछ ।फिजीमा अधिकांश नेपालीको जीवनस्तर उच्च–मध्यमस्तरको रहेको देखिन्छ । मूलतः किसान नै रहेका त्यहाँका नेपालीहरु टापुको विकासको एक हिस्सा बनेर रहेका छन् ।
फिजीले संसारमा एक विकसित देशको है’सियत बनाइसकेकोले त्यहाँका अधिकांश नेपाली शिक्षित छन् । उनीहरुको मूल समस्या भनेको पहिचानको स’मस्या हो । किनकि उनीहरु हरतरहले आफ्नो मूल थलो नेपालसँग जोडिन चाहन्छन् । हालसालै उनीहरुले आफूलाई नेपालसँग जोडिन ‘नेपाल–फिजी एसोसिएसन’ नामक संस्थासमेत वैधानिकरुपमा गठन गरेका छन् ।
इतिहासका तथ्यहरुबाट के पनि शङ्का लाग्दछ भने बेलायती उपनिवेशकालमा नेपालीहरु फिजी, म्यान्मार, ब्रुनाईबाहेक दक्षिण अफ्रिका, फोकल्यान्ड, अर्जेन्टिना, मलेसिया, इन्डोनेसिया, टिमोरलगायत धेरै देशमा लगिएको हुन सक्छ । नेपालीहरु आफ्नो पहिचानको खोजीमा फिजीमा जस्तै मानसिक प्र’ताडना खेपेर बसेका हुन सक्छन् । जुन नेपाल सरकार, कूटनीतिक नियोग र एनआरएनएलगायतको खोजीको विषय बन्नु आवश्यक छ ।
के उनीहरु नेपालसँग जोडिन सम्भव छ ? भावनात्मकरुपमा उनीहरु नेपाली छन् । भाषा भुले पनि उनीहरु पुनः सिक्न चाहन्छन् । चाहनाले भन्दा बाध्यतावश उनीहरुलाई पराईले विष पियाएको तथ्यहरुले बताउँछ ।म’र्ने बेलामा नेपालको एकमुठी माटो ढो’गेर म’र्न चाहन्छन् उनीहरु ।
नेपाल र नेपालीहरुप्रति अगाध स्नेह र सम्मान छ उनीहरुको, त्यसैले उनीहरुलाई नेपाली होइनन् भन्न मिल्दैन । उनीहरुको भावनामा नेपाल र नेपालीको माया, सद्भाव र भ्रातृत्व छ भने आफ्नी आमाको काखमा जान खोजेको सन्तानलाई कानुनी आधार बनाएर भिœयाइनुपर्छ । कदापि रोक्नुहुँदैन ।
उनीहरुले आफ्नो देशसँग जोड्न आफू बसेको गाउँको नाम नै हेलम्बू राखेका छन् । त्यो नाम राख्नुको कारण ‘म नेपालमै छु’ भनेर आफ्नो मन बुझाउनु हो । त्यसमा नेपालप्रतिको मनोवैज्ञानिक श्र’द्धा लुकेको सहजै देख्न सकिन्छ । अझ छुटेको परिवारसँग १४० वर्षपछि पुनर्मिलन गराउन सके कति आभारी हुन्थे होला उनीहरु ।
उनीहरु सम्पन्न छन्, तर पहिचानबिना । त्यो पी’डा उनीहरुलाई बाहेक अरु बढी कसलाई पो थाहा होला र ! हाम्रो राष्ट्रियताको एक टुक्रा फिजीको का’भानान्गासाउ र हेलम्बूमा इतिहासको वि’ष पिएर बसेको छ भन्दा कुन नेपालीको चित्त नदुख्ला र !
के नागरिकता बोक्ने मात्र हुन् त नेपाली ? कसैले बलजफ्त बाबुबाट छुट्टिएर फोकल्यान्डमै आफ्ना केही पुस्ताहरु बिताए । कोही आमाबाट अलग बनाएर फिजीको लम्फासा टापुमा अवस्थित सिगाटोका पु¥याइयो । उनीहरु सयौँ वसन्तहरु पारिवारिक विछोडले मातृभूमि सम्झँदै बिताए ।
सम्झनाको प्यास मेट्न आफ्नो गाउँलाई हेलम्बू नाम दिए । नेपाल बिर्सन खोजे, तर सम्झना र सपनाले बिर्सन दिएन । त्यस्ता सन्तानलाई कसैले नेपाली होइनन् भन्न मिल्दैन । उनीहरुको भावनामा नेपाल छ, सपनामा नेपाल छ र नेपालसँग सधैँ जोडिएर रहने धोको छ ।
नेपालमा बसेर देश लुट्ने लुटेरा, नेपाली चेलीलाई अरब र अफ्रिकाका अँध्यारा गल्लीहरुमा बेच्ने अप’राधीले नागरिकता बोकेर देशको मुखमा कालो पोतिरहेका छन् । ती विदेशी खातामा कालो धन थुपार्नेहरुभन्दा प्रवासमा बसेर नेपालको भलो चिताउने नेपाली दाजुभाइ महान् छन् ।
सरकारले चाह्यो भने बर्मेली नेपालीलाई राजा महेन्द्रले जसरी आफ्नो थातथलो दिलाए उनीहरुलाई पनि गर्न सक्छ । नेपालसँग जोडेर उनीहरुले फिजीमा उखुलगायत कृषिमा गरेको उन्नतिको रहस्य नेपाल भिœयाउन सक्छ । साम्राज्यवादीहरुको बँधुवा मजदुरको रुपमा विदेसिन बाध्य बनाइएको र इतिहासले ठगेको नेपालीलाई पुनः आफ्नो पहिचानको सहयात्री चुन्न सक्छ ।
साथै सा’म्राज्यवादी अ’भिशप्तबाट मुक्त गर्न सक्छ ।अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा राष्ट्र, राष्ट्रियताको सीमा मनमा हुन्छ, उसको परम्परागत संस्कार र पहिचानमा हुन्छ भने राज्य र देशको सीमा भूगोलमा । अतः आफ्नो भूगोलमा निर्बाध सम्पर्कका लागि राष्ट्र (जनता) र राष्ट्रियता (पहिचान)ले जोड्दै दैवको कुचक्रले पिल्सिएका उनीहरुलाई नेपाली भन्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।यो विषयमा नेपाल सरकारले पनि फराकिलो नीति बनाउनु जरूरी छ ।
राज्य मानवनिर्मित भूखण्ड हो र त्यसको आधार पहिचान हो भने राष्ट्र, देश, राष्ट्रियता र राज्यको परिभाषालाई मिसमास गर्न पाइँदैन । एनआरएनएहरु पनि भोलिका फिजी मूलका नेपालीझैँ पहिचान खोज्ने संघर्षमा पुस्तौँपुस्ता भौँतारिने दिन नआओस् भन्नका लागि राष्ट्र, देश, राष्ट्रियता र राज्यबारे स्पष्ट नीति बनाउन सरकारलाई द’बाब दिने र आफैँले पनि आफूलाई स्पष्ट पार्न जरूरी छ ।
अन्त्यमा, नेपाली देश रहुन्जेल मात्र देशसँग जोडिने हो, देश मेटिएपछि जोडिने आफ्नो समुदायसँग हो । त्यो समुदाय नै त्यो बेला अदृश्य राष्ट्र बन्दछ जुन भावनामा मात्र सीमाङ्कित हुन्छ । हामी एनआरएनहरुले यो कुरा महसुस गर्न थालिसकेका छौँ ।हामी सीमारहित देशमा फिजीका नेपाली मात्र होइन, हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित संसारको कुनाकुनामा बाध्यताले च्या’पिएर बसेका सबै ज्ञात–अज्ञात नेपालीलाई जोड्न प्रयत्न गरौँ ।
अब कसले कति कमायौँ त्यसको हिसाब गर्दै गरौँला, राष्ट्र र पहिचान दबाएर बसेका हाम्रा आफन्त जोड्न के गर्दै छौँ त्यसले नै इतिहासमा मह¤व राख्नेछ । गुलाब जहाँ फुले पनि गुलाब भएरै फुल्दछ । जानी–नजानी फिजीका हाम्रा दाजुभाइ चौथो पुस्तामा समेत नेपाली भएर फुल्ने साहस गर्दैछन् । उनीहरुको नेपालसँग जोडिने र नेपाली बनेर म’र्ने महान् सपना पूरा होस्, शुभकामना !
नेपाली युवा प्रताप बस्नेत पनि रुसविरुद्ध युक्रेनका तर्फबाट यु’ ‘द्ध ल’ड्न’ गए (भिडियो)
No Comments on नेपाली युवा प्रताप बस्नेत पनि रुसविरुद्ध युक्रेनका तर्फबाट यु’ ‘द्ध ल’ड्न’ गए (भिडियो)
काठमाडौँ :नेपाली युवा प्रताप बस्नेत पनि रुसविरुद्ध युक्रेनका तर्फबाट यु’ ‘द्ध ल’ड्न’ गएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले आफ्नो घर नेपाल भएको र नाम प्रताप बस्नेत भएको खुलाएका छन् ।
अन्तरास्ट्रिय प्रवासी समाचार
वेलायती टेनिस खेलाडी इमाले दिइन् नेपाली युवक अमृत मगर विरुद्ध उजुरी, अदालतद्धारा सजायको फैसला
No Comments on वेलायती टेनिस खेलाडी इमाले दिइन् नेपाली युवक अमृत मगर विरुद्ध उजुरी, अदालतद्धारा सजायको फैसला
काठमाडौ । विदेशमा अध्ययन गर्न वा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरुले त्यहाँ पनि गैर कानुनी काम गरेका भेटिन्छन् । कति नेपाली विदेशको जे लमा छन् । हालै बेलायतमा पनि एक नेपालीलाई सजाय सुनाइएको छ । बेलायती महिला टेनिस खेलाडी इमा राडुकानुलाई पक्ष्याएको भन्दै एक नेपाली युवकलाई सजाय हुने भएको छ । सो घटनामा नेपाली युवकलाई अदालतले दो षी ठहर गरेको छ ।
यूएस ओपन च्याम्पियन तथा हाल बेलायती नम्वर एक महिला टेनिस खेलाडी राडुकानुलाई पक्ष्याएको भन्दै ३५ बर्षे नेपाली युवक अमृत मगरलाई अदालतले दो षी ठहर गरेको छ । डेलिमेलका अनुसार ब्रोम्ली मजिस्ट्रेट अदालतले अमृतलाई राडुकानुलाई बारम्बार पक्ष्याएको जनाएको छ ।
राडुकानुको घरमा जडान भएको सिसिटीभी फुटेजमा अमृत धेरै पटक देखिएको र उनले फुलहरु, प्रेम पत्रहरु उनको ढोकामा छोड्ने गरेको जनाएको छ ।
अमृतले यस्तो हरकत गरेपछि राडुकानुले आफु असुरक्षित भएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन । साथै उनले आफ्नो बयानमा पनि आफु एक्लै बाहिर जाँदा डर लाग्ने गरेको बताइकी थिइन ।
अमृतले उनलाई एक बर्षदेखि निरन्तर फलो गर्ने गरेको र पछि उनको घर नै पत्ता लगाएर ढोकामा पुग्ने गरेको बताइएको छ । अब अदालतले दो षी नै ठहर गरेर अर्को महिना सजाय सुनाउने भएको छ । यो घटनामा अमृतको आधिकारीक धारणा भने बाहिर आएको छैन ।
अमृतले पनि किन यस्तो गरे भन्ने कुरा उनका तर्फवाट केही सार्वजनिक भएको छैन । यो घटनाले बेलायतमा बस्ने नेपालीहरु बीच भने चर्चा पाएको छ । खेलाडीले मगरका सबै कृयाकलाप वारे जानकारी गराउँदै सरकार समक्षा असुरक्षा भएको बताए पछि ति नेपाली उपर कारवाही हुने भएको हो ।
पोर्चुगलमा एक नेपाली युवाले गरे देहत्याग
No Comments on पोर्चुगलमा एक नेपाली युवाले गरे देहत्याग
लण्डन : विगत तीन वर्षदेखि पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आएका एक नेपाली युवकले देहत्याग गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका महासचिव राज कुमार थापाका अनुसार ३८ वर्षीय तर्कराज भट्टले बिहीबार रु खमा झु ण्डि’एर देहत्याग गरेका हुन्।
उनलाई बस्ने घरभन्दा केही परको स्थानमा गएर रु खमा डो री ल’गा’एर झु न्डि एको अवस्थामा प्रहरीले भेटेको थियो । कञ्चनपुरकाे भीमदत्त नगरपालिका घर भएका भट्ट पोर्चुगलको आल्बुफेइरामा बस्दै आएका थिए । उनी सोही क्षेत्रमा एउटा कृषि फार्ममा काम गर्थे ।
उनको शवलाई प्रहरीले पोस्टमार्टमका लागि स्थानीय अस्पतालमा राखिएको थापाले जानकारी दिए । उनका एक छोरा र श्रीमती छन् ।
यो पनि : प्र्याङ्क भिडियो खिच्नेलाई अब कारबाही हुने
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थानमा प्र्याङ्क भिडियो खिच्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना प्र्याङ्क भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । गृहले अनुमतिविना तस्बिर पनि नलिन भनेको छ ।
No Comments on बिदेशमा आफ्नै व्यवसाय भएका शर्माको घरको आँगन टेक्नै लाग्दा….
बार्सिलोना । नेदरल्यान्ड्सको पुरमेरेन्डमा आइतबार साँझ स्कुटरको ठ’क्करबाट ग’म्भीर घा’इते भएका एक नेपालीको उपाचारको क्रममा मृ’त्यु भएको छ ।
दाङ घर भई नेदरल्याण्ड बस्दै आएका ५६ वर्षीय विकास शर्माको एम्स्टर्डम मेडिकल कलेजमा आइतबार राति नै उपाचारको क्रममा मृ’त्यु भएको हो । मृ’तक शर्माका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी नेदरल्यान्ड्समा नै रहेका छन्। एनआरएनए नेदरल्याण्डस पूर्वअध्यक्ष मनोहरी शर्माका
अनुसार पैदलयात्रा गरिरहेका उनलाई तीव्र गतिमा गुडेको स्कुटरले ठ’क्कर दिएको थियो। ‘आफ्नै पसलबाट घर फर्केने क्रममा दु’र्घटना भएको हो ।‘बसबाट झरेर उहाँ घरतर्फ जादै हुनुहुन्थ्यो। घरको आँगन नजिकै पुग्नुभएको थियो । दु’र्घटनालगत्तै हेलिकप्टरमार्फत अस्पताल पुर्याइएको थियो ।
तर उपाचार हुँदै गर्दा उहाँको नि’धन भएको हो,’ पूर्वअध्यक्ष शर्माले भने। ग’म्भीर चो’ट लागेर घा’इते भएका शर्माको टाउकोको श’ल्यक्रिया गरिएको भए पनि सफल हुन नसकेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। स्कुटरमा सवार दुई जना पनि घा’इते भएको बताइए पनि
घटनाबारे प्रहरीको आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त भइनसकेको शर्माले बताए। विगत १६ बर्षदेखि नेदरल्यान्ड्समा बस्दै आएका शर्मा व्यवसायमा पनि संग्लग्न थिए । उनी नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा नेपाली जनसम्पर्क समिति नेदरल्यान्ड्सबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा पनि चुनिएका थिए ।
एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले शर्माको मृ’त्युप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेदरल्यान्ड्सले मात्रै नभई सिंगो युरोपले नै एक सामाजिक व्यक्तित्व गु’माएको बताए। आचार्यका अनुसार मृ’तक शर्माको बुधबार नेदरल्याड्समा अन्तिम बिदाइसहित अ’न्त्येष्टि गरिँदैछ ।
No Comments on सा’बधान, अष्ट्रेलियामा अ,’स्लिल भिडियोमा टाउको जोडेर ब्ल्या’कमेलिङ, भिडियो आफन्तलाई पठाईदिने भन्दै…
अष्ट्रेलियाको नेपाली समाजमा मात्रै होइन, द टेलिग्राफ पत्रिकाको सिड्नीका १ सय प्र’भावशाली व्यक्तिको सुचिमा समेत परेका चर्चित टिकटकर हुन् विजय बानिया । अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत तीनै बानिया आज बिहान ‘ह’नी ट्रया’प’को नि’शानामा पर्नुभएको छ ।
बिज्जु समेत भनेर चिनिनुभएका विजयको टाउको न,’ग्न पुरुषको शरिरसंग जोडेर भिडियो बनाई ठ’गहरुले पैसा माग्न थालेका हुन् ।बिज्जुले, ठ’गले १५ सेकेण्डको भिडियो पठाएर ब्या’लमे’लिङ गर्न थालेको बताउनुभयो । भिडियोमा बिज्जुको टाउको अर्कै पुरुषको शरिरमा जोडिएको प्रष्टै देखिन्छ ।
ठ’गहरुले उक्त भिडियो परिवारका सदस्य, आफन्त र साथीभाईलाई पठाईदिने भन्दै बिज्जुसंग १ हजार डलर मागेका थिए ।फेसबुक मेसेजमा छ’द्मभेषी नाम गरेका ठ’गले ‘तिमी निकै फेमस छौ, यो भिडियो हामीले सार्वजनिक गरिदियौं भने तिमी ब’र्वाद हुन्छौ’ भन्दै ड’र र ध’म्की समेत दिएको बिज्जुले बताउनुभयो ।
यस्तो मेसेज आएपछि बिज्जुले तत्कालै आफ्नो फेसबुक एकान्ट डिलिट गरिसक्नुभएको छ भने, टिकटर र इन्ष्ट्राग्राम समेत प्राइभेट सेटिङमा राखिसक्नु भएको छ । यस्तो मेसेज आएपछि आफु निकै त’नावमा आएको समेत बिज्जुले बताउनुभएको समाचार नेपालट्युबले लेखेको छ ।
त’नाबकै बिच काममा गएका बिज्जु काम सकेर केही बेरमै घटना बारे स्क्यामवाच र प्रहरीमा उ’जुरी गर्ने प्रकृयामा रहेको बुझिएको छ ।५ दिन अगाडी आफ्नो फेसबुकमा आएका फ्रेण्ड रिक्वेष्टहरु का’टछाट गर्ने क्रममा झु’क्किएर एउटा अ’परिचित अकाउन्ट साथी बन्न पुगेको बिज्जुले बताउनुभयो ।
जेसिका स्या’न्टिआगो नामको उक्त नक्कली फेसबुक आइडीबाट बिज्जुलाई सोमबार बिहान ४ बजे एक्कासी भिडियो कल आएको थियो । काममा जान तयारी गरिरहेकै बेला फेसबुक मेसेन्जरमा भिडियो कल आएपछि बिज्जुले उठाउनुभयो ।केही सेकेण्ड बिज्जुको भिडियो मोबाइलको स्क्रिनमा देखिएपछि उता पट्टी भने कोही देखिएको थिएन ।
केटीका आवाजमात्र आउन थालेपछि फोन का’टेर बिज्जु आफ्नो नि’त्यकर्ममा लाग्नुभयो । त्यसको केही घण्टा पछि आफ्नो फेसबुक च्याटको भिडियोबाट नि’कालिएको टाउको जोडेर बनाइएको अश्लिल भिडियो मेसेज आएपछि बिज्जुको हो’सहवास् उड्न थालेको हो ।नेपालट्युब
No Comments on जापानको कोबेमा निधन भएका नेपाली विद्यार्थीको जापानमै अन्त्येन्टि,संकलित रकम आफ्न्तलाई हस्तान्तरण
जापानको कान्साईमा यहि जनवरी १२ तारिक आफ्नै कोठामा मृत भेटिएका किरण खड्काको आज जापानमै अन्त्येष्टि सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल घर बाग्लुगं नगरपालिका खहरेखोला घर भएका खड्का कोबे सहरमा बस्दै आएका थिए । विद्यार्थी भिषामा रहि कोबे कोकुसाई दाईगाग्कोमा अध्यन गर्दै आएका मृतकका बुबा आमा नेपालमै रहेका छन् ।
परिवारमा परेको त्यो पिडालाई थोरै भएपनि कम गर्ने उद्देश्यका साथ खड्काको शव व्यवस्थापन लगायत पिडामा रहेका परिवारजनको सहयोगका लागी एनआरएनए जापान ,क्षेत्रीय समिती कान्साईले संचालन गरेको आर्थिक सहयोग अभियानमा विभिन्न संघ -संस्था लगायत “Helping Hand Japa Team “(HHJT) कोबेको सहयोग तथा सक्रियतामा ५१०१५६ यन गरि संकलित कुल रकम जापानी यन “१२११५७८ “आज अन्त्यष्टि पश्चात संयुक्त रूपमा एनआरएनए जापानका कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा गैरे ,एनआरएनए कान्साईका संयोजक दिलीप शर्मा तथा HHJT का श्री केपि ओलीले मृतकका आफन्त सुमित खत्री र प्रेम खत्रीलाई विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितीमा सहयोग रकम हसतान्त्रण गरिएको छ ।
यो पनि -युएईको अबुधाबीमा विस्फोट हुदा ३ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते
युवतीसहित चार जनाको एकसाथ मृत्यु, कारण थाहा पाउँदा मन भक्कानिन्छ
No Comments on युवतीसहित चार जनाको एकसाथ मृत्यु, कारण थाहा पाउँदा मन भक्कानिन्छ
काठमाडौं । ग्रिसमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका ४ जना नेपालीहरूको पहिचान खुलेको छ । कात्तिक २५ गते टर्कीबाट ग्रिस छिर्न खोज्दा सवारी दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा चार जना मृत्यु भएको थियो ।
मृत्यु हुनेमा दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका–६ का ३० वर्षीय राजु लामा, रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–४ की २१ वर्षीया रमिला घले ‘शर्मिला’, कैलाली जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका–४ का ३८ वर्षीय लक्ष्मण सापकोटा र तनहुँ जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका–५ का ओमबहादुर थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सवारी लाइसेन्स नभएका मोल्दोभाली चालकले चलाएको कालो कारमा १५ जना सवार थिए । ग्रिस प्रहरीले रोक्न खोजेपछि तीव्र गतिमा हुइँकिएको कार पर्खालमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।
दुर्घटनामा घाइते भएका दोलखा, भीमेश्वर नगरपालिका–९ का मनु लामा र कैलालीको गौरीशंकर नगरपालिका–४ का लोकराज आचार्य केही दिनको उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए । लोकराज र लक्ष्मण असोज २ मा नेपालबाट सँगै टर्की उडेका थिए । मनु र राजु भने असोज ९ मा उडेका थिए । एजेन्टहरू शम्भु लामा, ईश्वर लामा, सुरज लिम्बूलगायतलाई पैसा बुझाएर उनीहरू गएका थिए ।